iHelp Dementia / Asebekhulile GPS Monitoring & Fall Detection Alarm (Akukho ukubhaliswa kwanyanga zonke) | Izixazululo ze-OMG
Inkinobho Yokushaywa Kwezimo Eziphuthumayo Ephezulu, Ikhamera Worn Worn Police, Ukulandelela i-GPS & Umbhede Wokuphuma Pad Alarm, Umhlinzeki Wekhamera Efihliwe Efihlekile - Ikhaya Nezibhedlela
I-iHelp Dementia / Ukuqapha I-GPS Yabantu Abadala & I-Alarm Yekutfola Ye-Fall (ngaphandle kwemali yenyanga)
Ukukhuthazwa: S $ 248
(Ukusetshenziswa kwe-S $ 298)
Ngokwanda kwabantu asebekhulile, ukunakekela asebekhulile kuba yinto ebalulekile. I-iHelp ingabheka ngesikhathi esifanele isimo sabantu asebekhulile, lapho kukhona ukuwa, iHelp GPS yokulandelela asebekhulile ingadala i-SMS ngokuzenzakalela kumakhalekhukhwini womunye umuntu, ukuze usizo lunikezwe ngokushesha.
Ukulandela i-iHelp GPS asebekhulile kusiza imindeni kanye nokuhlupheka kwabantu asebekhulile ngezinkinga ezihlobene nenkumbulo. Uma unomzali noma ilunga lomndeni elibonisa iphethini elihambisanayo lokuziphatha okukhohlwayo, noma kungase kube nzima ukuphila ngokuzimela, i-Personal monitoring GPS yokulandelela idivayisi izokwenza impilo yakho ibe lula futhi ingakhathazeki kakhulu. iCare iyigugu kakhulu ngoba izokuxwayisa noma zirekhode uma umuntu osekhulile:
* Ukuhamba noma ukulahlekelwa endaweni ejwayelekile noma engajwayelekile.
* Kuphephile ngaphakathi noma eduze nomuzi wabo.
* Ukwenza udokotela ohleliwe ukuvakashelwa.
* Izinhlelo zokulandela GPS zinganikeza ukuqiniseka, ukuphepha nokuvikeleka okungenza umgwaqo onzima wememori-ukulahlekelwa kube lula futhi ungakhathazeki kakhulu kubo bonke abathintekayo.
Uma asebekhulile bezizwa bengavumelani, angakwazi ukucindezela inkinobho yekholi imizuzwana emithathu ukwenza ucingo kwifoni ehlobene. iHelp GPS Idivaysi yokulandelela asebekhulile idlulisa i-SMS nge-GSM inethiwekhi engenantambo. ICare incane, inhle futhi iphathekayo. Ungumngane osondelene nabo asebekhulile.
iHelp - GPS Yokuqapha Asebekhulile Nedivayisi Yokulandelela
Umdala uyakwazi ukuxhumana nelungu lomndeni ngenkathi kuphuthumayo ngokucindezela inkinobho.
Elula ukugqoka, elula futhi ewusizo
Izinhlelo Zamaselula Zokuqapha
Izinhlelo ezilula, izici zamandla
* Isaziso se-Auto Ukutholakala kokuwa
* Cindezela okukodwa - Inkinobho yosizo ye-SOS - Kuze ku-Amalungu omndeni we-6
* Ukukhumbuza i-SMS kwe-Power-On
* Inhlolovo Yesiko Se-Carrier
* Isikhumbuzi sebhethri esincane
* I-SMS enobuningi
* I-GPS ne-LBS
* Izingcingo Zamahhala
* Isevisi yokukhumbuza iPilisi
* Idatha Dlulisa Indlela (GPRS / GSM)
* Ukusetshenziswa kwehora le-72 nge-Battery Charge
* Isisindo Esincane * Ngosayizi Omncane - 7cm x 5cm x 1.5cm - Amandla wokuxhumana ahlangene kepha anamandla.
* Dinga i-SIM khadi yasendaweni nokusekelwa kwayo noma iyiphi ingxenye yezwe.
* Ingasebenza ngePost Paid noma Ikhadi elikhokhelwayo isb. I-SingTel Hi khadi, i-Starhub Happy Card, i-M1 M Ikhadi ayikho idatha yedatha edingekayo, nje izwi ne-sms lizokwenza.
* Sekela i-Google imephu.
* Ikhadi elikhokhelwa ngaphambili le-Starhub noma le-Singtel; ukubheka ibhalansi nokukhuphuka usebenzisa izinhlelo zokusebenza zeselula ze-AXS.
* Uhlelo oluhle lokukhokhelwa okuthunyelwe: I-M1 inecebo elibizwa ngokuthi i-MySim15. Lokhu kubhaliswa kwenyanga kwe-$ 15 yama-100mins nama-500sms.
Faka ikhadi le-SIM
Ukubuka okuphelele kwe-12756 Ukubuka kwe-18 Namuhla
I-OMG Solutions - Iklonyeliswe ngeSingapore 500 Enterprise 2018/2019